भो चाहिएन यस्तो राष्ट्रियता « Khasokhas Follow @khasokhasmag
भो चाहिएन यस्तो राष्ट्रियता
के मधेशीले आफुलाई राष्ट्रभक्त प्रमाणित गर्न भारतीयसँग लडेर सीमामा रगत नै बगाउनु पर्ने ? मलाई नेपाली नागरिकता दे भन्दा राष्ट्रप्रेमी नठहरीने ? देशको संविधानमा पूर्ण अधिकार दे भन्दा संविधानप्रतिको प्रेम नझल्किने ?
अब चाँहि लाज लाग्यो है, यस्तो राष्ट्रियता देखेर । हिजो राज्यसँग आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहँदा देशद्रोही करार दिइएका यी देवनारायण यादवहरु आज आफ्नो भूमी र प्राण रक्षाको लागि छिमेकीसँग लड्दा राष्ट्रवादी बनाइए । हिजो सरकारलाई मेरो अधिकार दे भन्दा धोती भन्दै गाली गरिएकाहरुलाई आज भारतसँग लडेको भन्दै टोपी लगाइँदैछ ।
मधेशी न हिजो राष्ट्रघाती थिए न आज राष्ट्रवादी भएका हुन् । मधेशी वर्षौंदेखि आफ्नै भूमिभित्र आफ्नै सरकारसँग लड्दै आएका छन् । त्यस्तै वर्षौंदेखि आफ्नो गाउँ र देशको सीमा रक्षाको लागि सीमामा पनि लड्दै आएका छन् । मधेशीले राज्यभित्रै राज्यविहिनताको पुस्तौंपुस्ताको अनुभव बोकेका छन् अनि सीमामा पनि राज्यविहिनता कै हालतमा लठ्ठी र भाटा लिएर सीमाको रक्षा गर्छन् । देशभित्र संघीयता र सींमाकनको मुद्दा उठाउँदा अपराधी हुने मधेशी अर्को देशसँग सीमा रक्षाको लागि रगत बगाउँदा देवनारायण यादव सरह जोकर बन्छन् ।
मधेशीले न कहिले ब्याक अफ इन्डिया कै नारा लगाए । न भारतलाई आफ्नो जल र भूमि नै बेचे । यी दुबै काम गर्ने अरुहरु नै हुन् । हामी मधेशी हौं, जसले भारतसँगको सांस्कृतिक, सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई कायम राखेका छौं र हामी मधेशी नै हौं जो सँधैभरी भारतसँग सीमा रक्षाको लागि र आफ्ना भारतीय सम्बन्धीहरुसँग आफ्नो देशको बखान गर्दै लडिरहन्छौं । त्यति त यहाँका राष्ट्रवादीहरुले ब्याकअफ इन्डिया र आई एम वीथ केपी ओली भनेका छैनन् होला जति हामी मधेशीहरु आफ्ना भारतीय नातेदारहरुसँग तिम्रो देशभन्दा मेरो देश राम्रो भन्दै लडेका छौं ।
केही व्यक्तिहरुलाई देवनारायण यादवहरुको कार्य नयाँ लाग्यो होला, त्यसैले टोपी लगाएर राष्ट्रभक्त नेपाली बनाउन खोजेका । तर, तराई मधेशको गाममा यी घटनाहरु नौला होइनन् । अब मधेशीलाई धोती भनेर सम्बोधन गर्दा लाज लाग्दैन । यसरी टोपी लगाई दिएर धोतीहरुको अपमान नगरौं । थोरै भएपनि लाज गरौं । भो, हामी राष्ट्रघाती नै ठीक छौं तर यसरी राष्ट्रवादको टोपी लगाएर राष्ट्रवादी हुनुको परिभाषा दिन्नौं ।
तस्विर साभार : श्यामसुन्दर यादवको फेसबुक